माकुरा आफ्नै जालोमा किन फस्दैन ? ~ विज्ञान संसार
माकुरा आफ्नै जालोमा किन फस्दैन ?
Posted by Om Bhandari On 7:33 PM
माकुराले आफ्नो जालोमा विभिन्न किराहरू पासोमा पारेर शिकार गर्दछ । कुनै किरा माकुराको जालोमा फस्यो भने फुत्कने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसैले माकुरा सबैभन्दा सफल शिकारीहरूमध्यमा पर्दछ । तर त्यति धेरै किराहरू टाँस्सिने जालोमा माकुरा आफै किन फस्दैन त ?
वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसको दुईवटा कारणहरू छन । पहिलो, कुनै-कुनै माकुराहरूको शरीरभरि एक विशेष प्रकारको तेल उत्पान हुन्छ । यही तेलको कारण धेरै माकुराहरू आफ्नै जालोमा फस्नबाट जोगिन्छन ।
दोस्रो, जालो बुन्दा सबै माकुराहरूले कम्तिमा दुई किसिमका रेशाहरूको प्रयोग गर्दछन, एक टाँसिने र अर्को नटाँसिने । आफैँले जालो बुन्ने हुनाले माकुराले कुन रेशा टाँसिने र कुन रेशा नटाँसिने भनेर सजिलै छुट्याउन सक्छ र यसले नटाँसिने रेशामा मात्रै टेक्न सक्दछ । त्यसैले माकुरा आफ्नै जालोमा फस्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
Categories: जनावर, माकुरा
भविष्यको संसार कस्तो होला ?
हामी हाई किन काढ्छौँ ?